Fatiantoka ho an’i Wisconsin ny fahazoan’i Lagos fiaran-dalamby · Global Voices teny Malagasy
Hanamaivana ny fifamoivoizana ao Lagos, renivohitra ara-toekarenan'i Nizeria ireo lamasinina
Voadika ny 26 Janoary 2022 5:38 GMT
Ny governemantan'i Fanjakana Lagos Babajide Sanwo-Olu sy ny ekipany tao amin'ny orinasan'ny fiaran-dalamby Talgo ao Milwaukee, Wisconsin, Etazonia. Sary avy amin'i Babajide Sanwo-Olu (pejy Facebook), 19 Janoary 2022
Tamin'ny 18 janoary, nividy fiaran-dalamby roa tao amin'ny Talgo, orinasa mpamokatra fiaran-dalamby any Milwaukee, Wisconsin, Etazonia, ny governemantam-panjakan'i Lagos any Nizeria, Babajide Sanwo-Olu, ho ampiasaina amin'ny tetikasa Lagos Metro Rail izay hanomboka amin'ny taona 2022. Hanampy hanalefaka ny fitohanana ao amin'ny iray amin'ireo tanàna be olona indrindra ao Afrika ireo fiaran-dalamby ireo no sady hamaha ny disadisa mangidy eo amin'ireo mpanao politika ao an-toerana ao amin'ny firenena iray Amerika Avaratra.
Niteraka ady ara-pitsarana naharitra teo amin'ny Talgo sy ny Fanjakan'i Wisconsin ny politikam-piandaniana ifanenjehan'ny Demaokraty sy ny Repoblikana eo an-toerana. Noho izany, tsy nampiasaina nandritra ny folo taona ireo lamasinina “naorina tany am-boalohany ho an’ny lalamby haingam-pandeha mampitohy an’i Chicago, Milwaukee, Madison sy ireo Tanàna Kambana”.
Nitatitra i Christine Hatfield, mpanao gazety ao amin'ny Wisconsin Public Radio (WPR) fa tamin'ny taona 2009, nanambara fifanarahana tamin'ny Talgo momba ny fiaran-dalamby roa vaovao haorina ao amin'ny fanjakana ary ampiasaina amin'ny lalamby ho an'ny fiaran-dalamby haingam-pandeha avo lenta mampitohy an'i Milwaukee sy Madison i Jim Doyle, Demaokraty, governoran'i Wisconsin tamin'izany fotoana izany.” Nitranga indrindra izany taorian'ny volavolan-dalàna federalin'i Etazonia ho fandrisihana, izay nanome 810 tapitrisa dolara Amerikana ho an'ny Fanjakan'i Wisconsin hanatanterahana izany fifanarahana izany. Na izany aza, nofoanan'i Scott Walker Repoblikana nandimby an'i Doyle ho governora ny tetikasa.
Tamin'ny taona 2012, nanamboatra fiaran-dalamby ho an'ny Fanjakan'i Wisconsin ihany ny Talgo mba hiady varotra indray amin'ny fifanarahana. “Fahaverezan'ny asa tao amin'ny orinasa vaovaon'ny Talgo any Milwaukee sy fitoriana eny amin'ny fitsarana tsy azo ihodivirana no vokatr'izany. Niafara tamin'ny fandoavan'ny fanjakana vola 50 tapitrisa dolara ho an'ny Talgo izany ary nitazona ireo lamasinina ny orinasa. May ny 50 tapitrisa dolara volan'ny mpandoa hetra no dikan'izany. Nandoa vola 50 tapitrisa dolara izahay ary tsy nahazo na inona na inona tamin'izany,” araka ny nosoratan’i Dave Cieslewicz, mpanao gazety ao amin'ny Isthmus, gazetim-piarahamonina ao Madison, WI.
Ny fametrahana ara-pitsarana nifanaovan'i Wisconsin sy ny Talgo no nahatonga ny handoa “vola mitentina 50 tapitrisa dolara ho an'ny fiaran-dalamby” nefa mbola ny orinasa ihany no tompon'ny fiaran-dalamby, hoy i Hatfield ao amin'ny WPR.
Ny tetikasa lalamby Lagos
Lalambin'i Lagos tazanina avy eny an-habakabaka, mbola eo am-panamboarana. Sary avy amin'i Babajide Sanwo-Olu (pejy Facebook), 3 Janoary 2022
Hapetraka amin'ny tetikasa fitaterana faobe an-tanàn-dehibe amin'ny lalamby Lagos ireo fiaran-dalamby Wisconsin novidin'ny governoran'i Lagos Sanwo-Olu. Tombanana ho mitentina 1,4 lavitrisa dolara Amerikana, mizara ho tambajotra roa misongadina ny tetikasa lalamby Lagos, ny zotra manga Okokomaiko-Marina 27 kilaometatra, ary ny zotra mena Marina-Agbado mirefy 30 kilaometatra. Ny orinasa China Civil Engineering Construction Company (CCECC) no mitantana ny voalohany.
Ny zotra Mena sy Manga, izay samy manana gara miisa 13 kosa no hanala ny fitohanana ao amin'ny iray amin'ireo tanàna be mponina indrindra ao Afrika. Tombanana ho 17,5 tapitrisa ny isan'ny mponina ao Lagos, izay fitambarany ny an'i New York na Londra mitambatra. Ny fitohanan’ny fifamoivoizana goavana ao an-tanàna no antony handanian’ny Lagosians 30 ora isan-kerinandro amin’ny fifamoivoizana, na “75 isanjaton’ny fitambaran'ny ora mandroso sy miverina iasana mandritra ny herinandro”, araka ny tatitra navoaka tao amin’ny gazety BusinessDay any Nizeria.
Tsy voafetra amin'ny fihenan'ny taham-pamokaran'ny Lagosiana ny vokatry ny fitohanan'ny fifamoivoizana. “Misy fiantraikany goavana eo amin’ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batan'ireo mpiasa” koa izany. “Hitondra fanamaivanana vaovao ho an'ny fitateram-bahoaka any Lagos tokoa ny tetikasa lalamby”, hoy i Sanwo-Olu, nandritra ny fividianana fiarandalamby tany Wisconsin.
Na izany aza, tsy ny Lagosiana rehetra no faly amin'ny tetikasa.
Nitaraina ireto mpisera Twitter ireto fa efa nahazo fiaran-dalamby ny governoran'ny Fanjakan'i Lagos teo aloha ho an'ny tetikasa fiarandalamby “tsy feno”:
Ity lalamby maivana ity no sakafo tolakandron'ny governoran'ny fanjakana Lagos rehetra.
Azo takarina ny fisalasalana momba ny fahavitan'ny tetikasa lalamby. Tamin'ny 11 May 2011, nijery sy nividy fiaran-dalamby avy amin'ny Toronto Transit Commission (TTC) Kanadiana i Babatunde Fashola, governoran'ny Fanjakan'i Lagos tamin'izany hanaovana tetikasa fitaterana lalamby Lagos izay mbola ho vitaina. Izany no mahatonga ny fisalasalana amin'ny fividianana fiarandalamby Sanwo-Olu any Wisconsin.
Mpisera iray hafa nanakiana ny habetsaky ny vola nolaniana tamin'ny tetikasa naharitra folo taona nefa tsy nisy vokatra azo tsapain-tanana:
Rehefa nandany 13 taona sy miliara maro, dia mbola tsy nahavita ny tetikasa lalamby Lagos izy ireo ary te-hamadika an'i Nizeria ho Dubai
Oladeinde Olawoyin, mpanao gazety ao amin'ny gazety anjotra Premium Times nanamafy fa “nangirifiry tamin'ny tsirambina taorian'ny 17 taona tsy nanatanterahana ny fampanantenana ny lalamby haingana ao Lagos.” Nisy fifandraisany tamin'ny “olana ara-tamberin'andraikitra mifandraika amin'ny tsy fifanojoana amin'ny lany tamin'ny famatsiam-bola ny fahatarana tamin'ny famitana ny tetikasa fiaran-dalamby Lagos, araka ny filazan'i Olawoyin.”
Heverina ho fandresena ho an'i Lagos ny fividianana fiaran-dalamby vao haingana, raha toa ka manaraka ny drafitra nataony ny governemanta.